सुनचाँदीको मूल्यमा निरन्तर गिरावट, आज पनि घट्यो | Investopaper
केहि दिनदेखि नेपाली बजारमा पहेलाे धातु सुनको मूल्य निरन्तर ओरालो लाग्नेक्रम जारी रहेकाे छ । विहिवार प्रति ताेला १ हजार १ सय रुपैयाँले घटेकाे सुनकाे मूल्य आज शुक्रवार पनि प्रति ताेला १ हजार २ सयले घटेकाे हाे ।
विहिबार सुनको मूल्य तोलामा ९२ हजारमा कारोबार भएको थियाे भने आज तोलामा १ हजार २ सयले घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघकाअनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९० हजार ८ सय कायम गरिएको छ भने तेजावी सुनको मूल्य ९० हजार ३ सय रूपैयाँ रहेको छ । बिहीवार तेजाबी सुन प्रति तोला ९१ हजार ५ सय रूपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
त्यस्तै, शुक्रवार चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ । बिहीवार प्रतितोला रू. १ हजार ३४० मा कारोबार भएको चाँदी शुक्रवार रू. १ हजार ३०५ खरीदविक्री भइरहेको छ । बिहीवारको तुलनामा शुक्रवार चाँदी रू. ३५ ले घटेको हो ।
अन्तर्राष्टिय बजारमा भएको घटबढ अनुसार नेपालमा पनि सुनचाँदीको भाउमा घटबढ हुने गरेको छ । विश्व बजारमा सुनकाे मूल्य घटेकाे हुँदा यहाँ पनि मूल्य घटेकाे महासंघले जनाएकाे छ ।
← पूर्वमन्त्री बस्नेतले पठाए मेलम्चीमा राहत सामग्री
जानी राखाै ! सबैभन्दा शक्तिशाली गायत्री मन्त्रको अर्थ →